Dhac loo geeystay maqaayad somali sanadkii hore lugu weeraray magaaladda Göteborg - iftineducation.com
iftineducation.com – Maqaayada cunta laga cuno luguna caweeyo ee Vår krog ee ku taala xaafadda Hisingen ee Göteborg, ayaa goor dhow oo caaw ah waxeey niman hubeeysan oo wejiyada soo xirtay u geeysteen dhac iyo boob.
Afhayeen u hadlay booliska lana yiraahdo Peter Adlersson, ayaa saxaafada u sheegay ineey ku raad joogaan sadex nin oo wejiyada soo xirtay kuwaas oo dhaca geeystay.Mana jirto dhaawa gaaray ama loo geeystay dadkii maqaayadaasi fadhiyey.
Dhacdadaan ayaa ku soo aadeysa xilli habeenimadii xalay aheyd lugu dilay xaafada Frölunda labbo wiil oo walaalo ah iyadoo raggii falkaasi dilka ah geeystay aan weli la soo qaban. Maqaayada Vår krog ee Hisingen ayaa iyadu ah maqaayad sanadkii hore dableey hubeeysan tacshiirad ku fureen dad ka cunteeynayey gudaha maqaayadda sanadkii hore, halkaas oo ay ku dhinteen labbo tiro kale oo dad ahina ku dhaawacmeen. Weerarkii maqaaydaas ee sanadkii hore ayaa xabsiga loo dhigay dhalinyarro u badan soomaali oo qaarkood lugu xukumay xabsi daa’in.
Sheeko xariir qoraal ah: Dawaco iyo Waraabe